Nhau - Kune nzira dzakawanda dzekuvandudza bhizinesi
Kune nzira dzakawanda dzekuvandudza bhizinesi
Ningbo ZODI inovaka webhusaiti nyowani uye kusimudzira kweGoogle kuwedzera bhizinesi renji.
Nekuvandudzwa kwesainzi uye tekinoroji, hwakawanda hunyowani hutsva hwabuda. Network yekudzidzisa inozivikanwa zvakare nekuda kwematambudziko emagariro. Yepamhepo showa, muchokwadi, ini handitsigire iyi mhando yebhizinesi nzira. Ehe, zvakare ine zvayakanakira. Semuenzaniso, unogona kutsvaga vatengi uye vatengi vanogona kusiya mameseji kuti vabvunze, kuitira kuti vakwanise kutaurirana zviri nyore uye zvakananga.
Pane zvinhu zvinoverengeka zvinodiwa kuti vanotengesa kunze vanofanirwa kugutsa vasati vatengesa zviriko kunze kwenyika pakati pazvo pakagadzwa hukama hwebhizimusi nevatengi vanogona kukoshesa. Kazhinji, vatengesi kunze kwenyika vanogona kuwana ruzivo nezve vanotarisira vatengi mhiri kwemakungwa nenzira dzinotevera:
1. Mabhangi munyika yemutengi
2. Makamuri eCommerce kune dzimwe nyika
3. Consulates akamira kunze kwenyika
4. Masangano akasiyana siyana ezvekutengeserana
5. Dhairekitori rekutengeserana
6. Pepanhau uye kushambadza
Mushure mekuwana zita nekero yevanotarisira vatengi, mutengesi anogona kutanga kutumira tsamba, masetyhula, makatalogu, uye rondedzero yemitengo kumapati ane chekuita. Tsamba dzakadai dzinofanirwa kuudza muverengi kuti zita rake rinowanikwa sei uye dzichimupa ruzivo nezve bhizinesi remutengesi, semuenzaniso, kuwanda kwezvinhu zvakabatwa uye nezvakawanda sei.
Kazhinji, mutengesi anotangisa tsamba yekubvunza yakadai kumutengesi kunotsvaga ruzivo nezve zvigadzirwa zvaanofarira. Pakadai, tsamba inofanirwa kupindurwa nekukasira uye zvakajeka kuti igadzire kufadza nekusiya wakanaka pa muverengi. Kana kubvunza kwacho kuchibva kune mutengi wenguva dzose, mhinduro yakanangana nehunhu, ine chirevo chekutenda, ndizvo zvese zvinodiwa. Asi kana iwe ukapindura kumubvunzo kubva kune nyowani sosi, iwe nenzira yechisikigo uchaenda kwairi zvakanyatsonaka. Semuenzaniso, iwe unogona kuwedzera chirevo chakanakira nezvezvinhu zvakabvunzwa nezvazvo uye kukwevera kutarisa kune zvimwe zvigadzirwa zvingangofarira.